(Kugcine ukubuyekezwa On: 07/08/2020)
Uma uhlela uhambo oluya eYurophu, ubhekene nezindlela eziningi kangaka! izindawo Endless kanye nakho, that you could travel for years and still feel like you’ve missed something essential. This can lead to making the mistake of over-committing, futhi uphuthelwa imininingwane ezincane ezenza travel futhi isitimela sokuvakasha imilingo ngakho. Silapha ukuze bakutshele ukuthi yini akufanele akwenze futhi Indlela ukuhlela evakashele eYurophu, kusukela ekuqaleni kuze kube uqede!
Ngaphambi ungathola Tapas eyiqiniso Spanish, piazzas eRome noma esophahleni masimu ePrague, i kancane ebalulekile yokuphatha liyadingeka! Ngamafuphi nje, walungisa ngaphezulu wena lapho ohlela evakashele eYurophu, enkulu amathuba akho mnandi futhi uhambo ukucindezeleka khulula ophila kuze kube okulindele.
Ngakho lapha Gcina Isitimela ithiphu: ukhethe phezulu emihlanu, kumele okufanele leyo adventure European! Mhlawumbe okuphuza Hofbrauhaus e Munich, noma ngokuthatha uhambo canal e Amsterdam, noma behlola uDavide-engeli amaningi – e Florence. Noma ngabe siyini, uphawu lezo phansi ukuhlela uhambo lwakho lokuzungeza kubo. Akukhetha ngezitimela.
Manje njengoba sesikhulumile ngo Uqinisekisa ukuthi udinga ukuhlela evakashele eYurophu, olandelayo ngokukhetha izabelo zakho phezulu. Ngo umoya yolo, ungase ufune ukuya ngaphandle ithrekhi ezibhudulekile ukucinga amagugu afihliwe kwakuyilezo eziphakathi kwemizi. Kodwa Isitolo e kini othi efuna ukuya ngokumelene izindawo kuqhakanjiswe, ungase uthande ukuthatha isihlalo. Ebhasini izivakashi. Kukhona isizathu esenza ezindaweni ezifana waseColosseum, Eiffel Tower, futhi Charles Bridge are all ethandwa kakhulu ezivakashini: bemangalisa! Ungazizwa kufanele uthole endleleni eshayiwe ngenxa yakho nje. Uma enkulu ezikhangayo ozithanda, bese uya futhi uzibone.
Ngokufanayo, musa aphathe incwadi njengoba ivangeli. Kungase usho Louvre kuyinto ngokuphelele kumele-do on a uhambo Paris, but maybe you’d have a better day searching for Blek le igundane pieces on alley walls. Ukuvumelana nezimo, lapho usohambweni, kuyisihluthulelo, njalo!
Ithiphu 3: Travel dates are crucial when you plan a trip to Europe
Ithiphu 4: Assemble your travel documents is part of plan a journey to Europe
Njengoba kushiwo ngaphambili, kulula phezu bophezela bese uyazama khama e kakhulu. Kuyaqondakala ngokuphelele. ikhefu lakho eziyigugu kufanele sisetjentiselwe kahle, ngakho-ke kulula ukuzama phezu-ukupakisha imininingwane yohambo lwabo yakho uma uhlela uhambo oluya eYurophu. Nokho, lokhu kungaba yizindleko ezinkulu (ingasaphathwa uyakhathaza), njengoba phezu-ukupakisha uhambo ezinezindawo eziningi kakhulu ezinsukwini ezimbalwa kakhulu kuholela isikhathi esengeziwe endleleni, negesi ngaphezulu noma athenge amathikithi esitimela ngemali. Ezimweni ezimbi kakhulu, kungaba enkulu yokuhlaselwa uhambo, ukuyivala ibe ukufiphala kwehhotela Ukungena nokungena nasemigwaqweni (nge emasakeni njalo futhi ukukhipha izimpahla), ngibukele neze-wavakashela landscape uhlanga esedlule amafasitela isitimela. Uma kwenzeka, yehlisa kancane ijubane. uzoba londoloza zokuhamba futhi sithole isikhathi esengeziwe ukuhlola izindawo zakho.
Abavakashi ukuchitha imali eningi ukuthenga euro kusukela ebhange yabo (noma okubi nakakhulu, kusuka exchange esiphikisayo) ngaphambi kokufika e-Europe. Lokhu kuphumela Imali eningi! so don’t neglect this subject when you plan a trip to Europe.
iseluleko wethu amabombo manjalo i-ATM uma ufika e-Europe kanye ukuhoxisa ukheshi usebenzisa ikhadi lakho ATM. Kulula, futhi izinga lokushintshisana ukuthi uthola i-kuthengiselana pheze ngokuqinisekile ingcono kakhulu kunanoma iyiphi izinga siye ayithole ngisho ekhaya amabhange. Call ibhange lakho ngaphambi kokuthi uhambe ukubuza ATM kufakelwa ngamazwe, kanye ukubazisa ukuthi uzobe usebenzisa ikhadi lakho phesheya. Uma ungenalo ubatshele, kungase ubazise ucabanga ukuthi ukukhwabanisa, futhi kuzovimba ikhadi lakho. Futhi, buza uma ibhange lakho izindawo ngamazwe noma ukubambisana wendawo amabhange eYurophu.
Ithiphu 9: Don’t forget to call your phone carrier before you plan a journey to europe
Shayela inkampani yakho yenethiwekhi uma ephelele ukuhlela evakashele eYurophu futhi uthole i uhlelof ohlela ukusebenzisa ifoni yakho, bese uqiniseke ukumisa ifoni yakho ukugwema ngephutha amashaji edatha (kafushane: Ukucisha idatha yeselula futhi ukhawule inani izinhlelo zokusebenza zingase zisebenzise idatha yeselula). futhi, njengoba uhlelo, unamathele ukukhulula namanethiwekhi e-Wi-Fi ukulanda futhi ukuthumela ama-imeyili, kokuhlola Web nokusebenzisa Ama-app. IYurophu inenye futhi abaningi WiFi ezidonsela, ngakho ngeke aphume okuthintana eside. Kungenjalo, ukuthenga ikhadi le-SIM efonini yakho uma ufika Europe.
Eightydays is an awesome travel app that can help you plan a trip to Europe while giving travelers an easy look into the options available when ukuhamba kulo lonke elaseYurophu.
Abasebenzisi ukuqala ngokukhetha esinye idolobha ukuqala futhi uqede (okwamanje, kuyadingeka ukuze uqale futhi ukuqeda uhambo endaweni efanayo). Bese ukhetha usuku Ukuhamba, esingakanani uhambo kuyoba futhi bangaki izindawo ukufaka. Abasebenzisi futhi ukhethe ukuthi uyafuna yini ukubheka amadolobha e-Europe, European Union noma nje Schengen Zone. Uhlelo lokusebenza ngeke ke ukudala i uhambo, ukuqedela ne-Airbnb amazinga edolobheni ngalinye, kulabo ngebhajethi.
Kungenzeka ukuqhubeka ongakhetha mmangalelwa kuze lokusebenza okhubekisa phezu uhambo ukuthi kubukeka kukuhle. Futhi ungakhathazeki mayelana travel esingesihle: The site says ke ngokukhethekile ikhipha out zezindiza kude-kude and early morning departures that can drain travelers on the road.
Travlelers can use website Eightydays or the newly launched lokusebenza le-iOS to plan their European voyages.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, ungakwazi noma ukuthatha izithombe zethu futhi umbhalo kanye nje ukusinika credit nge isixhumanisi kulokhu okuthunyelwe ibhulogi, noma chofoza lapha: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/plan-trip-europe/ - (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi)
#bucketlist #HowToGuideEurope europetravel longtrainjourneys amathiphu isitimela Izikhangibavakashi traveltips